ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » သင်နဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ရဲ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များ Manage ကိုကူညီပါခြောက်စည်းမျဉ်းများ
အားဖြင့် Kayla ပီယပ်စ်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 18 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
သင်ကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်ကချိန်းတွေ့ကြမယ့်ဆိုရင်, သင်ကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ချိန်းတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်. ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့နှေးကွေးဆယ်နှစ်အရွယ်ရွှေရောင် Retrievers ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဆူညံ cockatiel မည်မကောင်းမည်, သူတို့နှလုံးဖို့အဓိကသော့ချက်သူတို့ရဲ့အဟိတ်တိရစ္ဆာန်ကနေတဆင့်.
Co-မိဘမကြိုးစားပါ. သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်သူမ၏ချီဟွာဟွာမှောင်မိုက်အရိပ်မှာ barks ကစိတ်ထဲမထားတတ်လျှင်, သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်လည်း. သင်ကကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းအဟိတ်တိရစ္ဆာန်မှသင်တန်းဆရာဖြစ်နေရင်တောင်, သူတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မပိုင်နှင့်သင်အရမ်းအသေးစိတ်ထွက်ကြံသည်အထိဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ (မျှော်လင့်) စကားပြောဆို.
နေရာလည်းမယူဖို့မကြိုးစားနဲ့. သူတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နှင့်အတူတစ်ဦးကလူတစ်ဦးရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအဆင်းလှသောအရာဖြစ်. ဒါဟာအစအလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောင့်, အထူးရရှိခဲ့သည်ခက်ခဲ. သင့်ရဲ့နေ့စွဲသူမ၏ pup နှင့်အတူကြာမြင့်စွာလမ်းလျှောက်သူမ၏တနင်္လာနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်ရှိသည်ဆိုပါက, အချို့သောကော်ဖီနှင့်အတူသူမ၏ပူးပေါင်းတောင်းဆို, စကားတခွန်းကိုမျှမပြောဘဲသူကကြိုးခုန်ဖို့မ. သင်သာသူတို့ရဲ့ကြီးကြပ်မှူးကြောင်ကုတင်ပေါ်အိပ်ကိုတွေ့မှပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့မိမိတို့အိမ်တွင်ညဉ့်သုံးဖြုန်းမယ်ဆိုရင်, ဒီကြောင်လေးကိုလှည့်ပတ်အလုပ်. တရားမျှတသောတရားမျှတကြောင်းရှည်လျားသင်တို့ရှေ့မှာကအိပ်ရာခဲ့.
Don "t သူတို့ကိုလှောင်ပြောင်စေ. ကြောင်တစ်ကောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ချိန်းတွေ့? သင့်ရဲ့ချစ်သူသူနှင့်တွေ့ဆုံလူတိုင်းအားမိမိတဲ့အခါဓာတ်ပုံတွေပြသပါသလား? သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နံနက်တိုင်းသူမ၏ချီဟွာဟွာဝတ်စားဆင်ယင်ပါသလား, တကကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့တောင်မှ? ဒီတရားသူကြီးရဲ့ရန်နေရာမဟုတ်ပါဘူး. အခွင့်အလမ်းတွေကိုများမှာ, သင်သည်ထိုသူတို့မှထူးဆန်းတယ်လို့ထင်ကြသင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အချို့နှင့်တကွထုံးတမ်းစဉ်ရှိသည်, ဒါကြောင့်နိမ့်ဆုံးမှအကျီစားမှုစောင့်ရှောက်.
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်ပတ်သက်သလား. တိရိစ္ဆာန်များကလူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်ရန်အလွန်စိတ်အားထက်သန်နေကြပါတယ်. သင်ကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏ကောင်းသော Grace သို့ရနိုင်မယ်ဆိုရင်, အခွင့်အလမ်းတွေကိုများမှာသူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်ကတရားစွဲဆိုနောက်သို့လိုက်ပါမည်ဟု. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖော်ရွေမှုဖြစ်ကြောင်းကိုသင်အတူတကွလုပ်နိုင်မှုအရာတို့ကိုရှာမည်.
ထည့်သွင်းလုပ်ဆောင်ရန် သင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်. များစွာသော Single အ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသားသမီးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏. သင်နဲ့အနာဂတ်အတူတကွတောက်ပတဲ့စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်တွေ့ဆုံစေနှင့်သူတို့ထိတွေ့ဆက်ဆံဘယ်လိုကြည့်ပါ. သူတို့ပထမဦးဆုံးမှာအချင်းချင်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်, ထိုအရပ်၌သူတို့ကိုရရှိရန်ကြိုးပမ်းမှု၌ထား. မသာပါကပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်, ဒါကြောင့်သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးအတွက်နှစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာဆောင် ခဲ့. ကြီးစွာသောလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်.
ကခမ်းနားကြီးကျယ်သည့်လက်ဟန်ခြေဟန်လုပ်. ဒါကြောင့်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တိုင်းရက်စွဲအပေါ်တစ်လျှောက်သူတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များတွင်၎င်း tag ဖြင့်ရှိသည်ချင်ကြပါဘူး, ဒါပေမယ့်အားထုတ်မှုမှတ်အဘယ်သို့သောအ. အားလုံးသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်သိရန်လိုအပ်သည်သင်သည်တနေ့သူတို့နှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲလျှင်ခြင်းဖြစ်သည်, သင်သည်သူတို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ချစ်ကြလိမ့်မယ်, လွန်း. သူတို့ရဲ့မွေးနေ့အခမ်းအနားကျင်းပ, သို့မဟုတ်ထိုသူတို့အားရယူထားသောကိုဝယ်ယူရန်. ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်ပန်းခြံသူတို့ကို ယူ.. ငယ်သောအရာတို့ကိုအစဉ်အမြဲရေတွက်, ဒါပေမယ့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမှကြွလာသောအခါ, တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကြီးမားသောအရာပင်ပိုမိုအလုပ်ဖြစ်.